အောက်တိုဘာလ 2015 |5၏စာမျက်နှာ 19 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 5)
Cinegy NATEXPO 2015 မှာဂျက် Pack ကိုတခုအဖြစ်မှ
ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ဗွီဒီယိုချုံ့ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်နှင့်ပလေးအောက်များအတွက် software ကိုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cinegy, 44-2015 နိုဝင်ဘာလကနေမော်စကိုရာယူပြီး, NATEXPO 18 မှာရပ် A20 အပေါ်သစ်ကို Cinegy ဂျက် Pack ကို feature ပါလိမ့်မယ်။ NATEXPO 2015 Cinegy မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရုရှားစျေးကွက်မှဂျက်လေယာဉ် Pack ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဂျက် Pack ကိုတစ် All-In-One ဖြစ်ပါတယ် ...
Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းတိုးချဲ့ IntekTV နှင့်အတူဖြန့်ဖြူးသဘောတူညီချက်မှတစ်ဆင့်လက်တင်အမေရိကသို့ရောက်ရှိ
IntekTV ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျနှင့်အတူဖြန့်ဖြူးသဘောတူညီချက်မှတစ်ဆင့်လက်တင်အမေရိကသို့ Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းတိုးချဲ့ရော, အောကျတိုဘာ 27, 2015-Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာ, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, မိုင်ယာမီအခြေစိုက်ကြောင်း IntekTV ကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်, တစ်ဦး ထုတ်လွှင့်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်အတွက်အထူးပြုဖြန့်ဖြူးအဖြစ်စမ်းသပ်, တိုင်းတာခြင်းများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနည်းပညာ, ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ...
CCW 2015: FUJINON ပရီးမီးယားလိဂ် PL-25-300mm detach Servo နှင့်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်တွေထဲမှာက Ultra HD စီးရီးနဲ့အတူ 4K Cabrio မှန်ဘီလူး
ဝိန်း, NJ - Fujifilm မြောက်အမေရိကကော်ပိုရေးရှင်း, Optical ဖုန်းများအတွက်တိုင်းလာမည့်အကြောင်းအရာ & ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာ့ဖလားမှာလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ drive ကိုယူနစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အသစ်အ 4K က Ultra HD စီးရီးနှင့်၎င်း၏ 25-300mm Cabrio zoom မှန်ဘီလူးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Optical ဖုန်းများအတွက်တိုင်းနယူးယောက်မြို့ရဲ့ယာကုပ်အမျိုးကို Javits စင်တာနိုဝင်ဘာလ 1454-1456 ထံမှပြေးသောပြပွဲကာလအတွင်း Fujifilm တဲ (#11 နှင့် 12) တွင်ပြပါလိမ့်မယ်။ "CCW ...
ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် Pix-E5 အယ်ဒီတာနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကဲန် Eakins ရန်၎င်း၏မှီခိုထေူ
Brighton, United Kingdom, အောကျတိုဘာ 27, 2015 - Hang က Man ရုပ်ရှင်မှာ Freelance အယ်ဒီတာနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်အမျှကဲန် Eakins သတ်မှတ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချဂီယာဆောင်ခဲ့၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သည်။ high-အရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများကိုမိမိစီမံကိန်းများအားလုံးအတှကျအသံဖုန်းများအတွက်နှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်မှီခိုဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောသူ့အလုပ်, လုပ်ဖို့အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ Eakins ရှိပါတယ် ...
ဘက်ပေါင်းစုံမိုက်ခရိုဝေ့ Technologies က Huntsville ရဲ့နယူး Multi-Purpose ဆက်သွယ်ရေးယာဉ်ပေါ်မှာစီးနင် Hitches
HUNTSVILLE, AL, အောကျတိုဘာ 27, 2015 - Huntsville, Alabama အဘိဓါန်၏မြို့, ပေါင်းစည်းမိုက်ခရိုဝေ့ Technologies က (IMT), အဆင့်မြင့်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် microLite HD ဗီဒီယို link ကိုစနစ်က၎င်း၏အသစ်က Multi-ရည်ရွယ်ချက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု / ဖြစ်ရပ်တုံ့ပြန်မှုဆက်သွယ်ရေးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လှိမ့်သည့်အခါ ယင်းအသံလွှင့်, အားကစား, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုဝေ့စနစ်များ, ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောနသန်သည် Crow, Huntsville ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မန်နေဂျာ ...
ဒါကြောင့်တစ်ဦးနဲ့ LED ဘို့အချိန်အသံလွှင့်စတူဒီယိုစွမ်းအင် Save ဖို့ Upgrade လား?
ဒါကြောင့်စွမ်းအင်ကိုချွေတာနဲ့ LED အလင်းလ်တာနှင့်သင်၏စတူဒီယို upgrade လုပ်ဖို့အချိန်လား? သူတို့တောက်ပနေနှင့်အနည်းငယ်သာပါဝါကိုအသုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်ရုံမန်နေဂျာများ, နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံအလင်းအိမ် PrimeTime ရဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ခိုလှုံပါ၏။ သူတို့က USA တွင်တည်ဆောက်တတ်နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးငါးနှစ်ကြာအာမခံရှိသည်နှင့်တစ်ဦးပန်ကာမလိုအပ်ပါဘူး။ 1SLED xB နဲ့ LED အလင်းကအပိုသစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းစံရဲ့အ ...
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် CCW 2015 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် - CCW 539, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်မှာ Booth 2015 ပိုကောင်းတဲ့တီဗီအတှေ့အကွုံကို enable ရာသည်၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် metadata ကိုမျိုးဆက်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပလက်ဖောင်း, သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ HEVC နှင့် 10GigE ထောက်ခံမှုအပါအဝင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ, မှတဆင့် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှု (QoS) ၏သာလွန်အရည်အသွေးကိုပေးစဉ်ထုတ်လွှင့်အသစ်ကဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကို၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုပြည့်စုံစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ် ...
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ Flexible နှင့်ပြောင်း 4K ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်, Ethernet နဲ့ WFX 2015 မှာ IP ကိုဖြေရှင်းနည်း
WESTFORD, Mass - ။ အောက်တိုဘာ 27, 2015 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ဆန်းသစ် IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူ၎င်း၏မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရွေးချယ်ရေးမည်ဖြစ်သည် အဆိုပါ WFX မှာ Nashville, Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆောင်မှုများညီလာခံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲ (WFX 2015), နိုဝင်ဘာ 18-19 ကိုးကွယ်ကြလော့။ Display ကိုတွင် Artel ရဲ့ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်လိမ့်မည် ...
5 ၏စာမျက်နှာ 19«ပထမဦးစွာ...«34567 » 10...နောက်ဆုံး»